အတာစားခြင်းဆိုသည်မှာ . . . . . – ADS Myanmar Blog
အတာစားခြင်းဆိုသည်မှာ . . . . .
“မဟာသင်္ကြန်” နှင့် တွဲဖက်၍ “အတာ” ဟူသော ဝေါဟာရ၊ “အတာစား “ဟူသော ဝေါဟာရတို့ကို တွေ့ရပါသည်။ “အတာ”ဟူသည် လောကီအလို ဒဏ်သင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် “အန္တ-အဆုံး End”ဟူသော ပါဠိပုဒ်မှ “အတာ”ဖြစ်လာသည်ဟုလည်း ကြံဆကြသည်။ ယင်းအလိုအားဖြင့် “အတာ”ဟူသည် ” နောက်ဆုံးကာလ၊ အကျပိုင်းကာလ”ကို ဆိုလိုသည်။ “အတာရက်”မှာ သင်္ကြန်အတက်ရက် ဖြစ်၏။ နှစ်တနှစ်၏နောက်ဆုံးရက်ပင်ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်အတက်ရက်နှင့် မွေးနေ့တိုက်ဆိုင်သူများသည် “အတာသင့်”သူများ ဖြစ်လာသည်။
မဟာသင်္ကြန်အတက်ရက်သည် ၁၃၇၇ခုနှစ် နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၉)ရက်၊ခရစ်နှစ် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလ(၁၆)ရက်၊စနေနေ့နံနက် (၂)နာရီ၊(၄၈)မိနစ်၊(၃၄)စက္ကန့် စနေနေ့ဖြစ်သည်။ အတာသင့်သော စနေသားသမီးတို့သည် အတာတက်မည့် အချိန်အတိအကျတွင် “အတာစား” ရပါသည်။ “အတာစား” ဟူသည် အတာတက်ချိန်မှာ ကောင်းမွန်သန့်ရှင်းစွာဝတ်စားဆင်ယင်လျှက် အရှေ့တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူကာပူဇော်ရိုသေထိုက်သူများကို လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ဖြင် ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ရတနာသုံးပါးစသည်တို့အား လှူဒါန်းပူဇော်ကြသောသူတို့သည် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ မင်္ဂလာတရား ပြန့်ပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကုန်ရာသည်။” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
မင်္ဂလသုတ်တော်နှင့်အညီ ရတနာသုံးပါး၊ မိဘဘိုးဘွားဆရာသမား၊ သူတော်ကောင်းများကို ရိုသေခြင်း၊ ပေးလှူခြင်းစသည်တို့မှာ ကုသိုလ်နှင့်တွဲနေသော မင်္ဂလာတရားတော်များ ဖြစ်သည့်အတွက် အပြစ်ကင်း၍ ပြုသင့်ပြုထိုက်သော အရာများဖြစ်ပါသည်။
အတာစားခွငျးဆိုသညျမှာ . . . . .
“မဟာသင်ျကွနျ” နှငျ့ တှဲဖကျ၍ “အတာ” ဟူသော ဝေါဟာရ၊ “အတာစား “ဟူသော ဝေါဟာရတို့ကို တှရေ့ပါသညျ။ “အတာ”ဟူသညျ လောကီအလို ဒဏျသငျ့ခွငျးဖွဈသညျ။ တနညျးအားဖွငျ့ “အန်တ-အဆုံး End”ဟူသော ပါဠိပုဒျမှ “အတာ”ဖွဈလာသညျဟုလညျး ကွံဆကွသညျ။ ယငျးအလိုအားဖွငျ့ “အတာ”ဟူသညျ ” နောကျဆုံးကာလ၊ အကပြိုငျးကာလ”ကို ဆိုလိုသညျ။ “အတာရကျ”မှာ သင်ျကွနျအတကျရကျ ဖွဈ၏။ နှဈတနှဈ၏နောကျဆုံးရကျပငျဖွဈသညျ။ သင်ျကွနျအတကျရကျနှငျ့ မှေးနတေို့ကျဆိုငျသူမြားသညျ “အတာသငျ့”သူမြား ဖွဈလာသညျ။
မဟာသင်ျကွနျအတကျရကျသညျ ၁၃၇၇ခုနှဈ နှောငျးတနျခူးလဆနျး(၉)ရကျ၊ခရဈနှဈ ၂၀၁၆ခုနှဈ ဧပွီလ(၁၆)ရကျ၊စနနေနေံ့နကျ (၂)နာရီ၊(၄၈)မိနဈ၊(၃၄)စက်ကနျ့ စနနေဖွေ့ဈသညျ။ အတာသငျ့သော စနသေားသမီးတို့သညျ အတာတကျမညျ့ အခြိနျအတိအကတြှငျ “အတာစား” ရပါသညျ။ “အတာစား” ဟူသညျ အတာတကျခြိနျမှာ ကောငျးမှနျသနျ့ရှငျးစှာဝတျစားဆငျယငျလြှကျ အရှတေ့ောငျအရပျသို့ မကျြနှာမူကာပူဇျောရိုသထေိုကျသူမြားကို လှူဖှယျပစ်စညျးတို့ဖွငျ ဆကျကပျပူဇျောခွငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။ ရတနာသုံးပါးစသညျတို့အား လှူဒါနျးပူဇျောကွသောသူတို့သညျ ကောငျးကြိုးခမျြးသာ မင်ျဂလာတရား ပွနျ့ပှားတိုးတကျပွညျ့စုံကုနျရာသညျ။” ဟုဖျောပွထားပါသညျ။
မင်ျဂလသုတျတျောနှငျ့အညီ ရတနာသုံးပါး၊ မိဘဘိုးဘှားဆရာသမား၊ သူတျောကောငျးမြားကို ရိုသခွေငျး၊ ပေးလှူခွငျးစသညျတို့မှာ ကုသိုလျနှငျ့တှဲနသေော မင်ျဂလာတရားတျောမြား ဖွဈသညျ့အတှကျ အပွဈကငျး၍ ပွုသငျ့ပွုထိုကျသော အရာမြားဖွဈပါသညျ။
Author kyawsoeaungadsPosted on April 13, 2016 April 6, 2016 Categories Ads.com.mmTags Knowledge
Previous Previous post: အတာအိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Next Next post: သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အန္တရာယ်ကင်းစွာပျော်ရွှင်နည်း